Ratidza horoscope: Tsvaga yako yakasarudzika nyaya yerudo - Kunamata
sei maapplication angu asingatore kurodha pasi
iphone 6 skrini yakatsemuka kugadzirisa
foni isingazive sim kadhi
youtube wont play pane iphone 5
Ida horoscope: Tsvaga yako yakasarudzika nyaya yerudo
Izvo kuongorora nyeredzi kuri kuwedzera kukurumbira ,nyeredzi, inoshandawo chose kune hupenyu hwako hwerudo.
Chii chauchawana mune ino chinyorwa:
Mahara erudo mahoridhe akavakirwa pachiratidzo chako chezodhiac
Chii hunhu hwako
Izvi zvinorevei kudanana kwako
Naizvozvo yakakwira nguva yekupa yakakodzera-inokodzera uye yakanyatso kutarisisa kune erudo horoscopes . Iwo maonero ekuti Taurus haikwane neGemini, kana Sagittarius haikwane neRibra, kutadza kusvika chiridzwa chakakosha yekuongorora nyeredzi. Mhedzisiro yeizvi ndeyekuti ruzivo rwakawanda rwakarasika.
Wese munhu ane yavo yemhando uye nekudaro yavo yega yakasarudzika yekuwedzera kana kupokana muhukama hwerudo . Mauri munowirirana uye mauri munowirirana.
Ndekupi uye kupi kubatana uye zvinhu zviri mumapuraneti ako zvinoenderana nenguva yako yekuzvarwa? Iyo horoscope ndeimwe hombe yakazara organic, mune yega yekubatana inotora chikamu.
Iwe unosarudza rudo ruzere neshungu nemoto, kana kuvhura moyo wako kune mudiwa mudiwa ane hunhu hwakadzikama.
Ida horoscope Aries
Uri inogamuchira uye inongoerekana yaitika murudo Aries, mune yako motto ‘Kunouya kubva kunonoka kwakanonoka’ . Iwe unotaurirana zviri nyore uye haunyari. Aries.
Iwo moyo wako unopisa usingakwanise kudzorwa uye kuti iwe ungade kunyengerera mune nyowani rudo mafaro. Iko hakuna zvirokwazvo hapana chakakanganisika neicho, kunze kwekunge iwe uchinakidzwa naka rudo rudo mudiwa parutivi rwako. Izvi zvinoreva kuti zvakakosha kwauri kuti iwe uve nemhando dzakasiyana mukati mehukama.
Kuenda kunze nemunhu waunoda uye kushingaira mumitambo, mitambo uye kurovedza muviri kunoshamisa. Unosarudza mazororo paunoita zvakawanda pamwe chete woenda pane chimwe chiitiko. Bungee kusvetuka, kusefuka uye kuenda pazororo rekusvetuka pamwe chete zvakakunakira iwe.
Zvamunodawo ndizvo mudiwa waunogona kutora naye dambudziko. Iyo Ropa rinoyerera zvineshungu kuburikidza nemutsinga dzako uye iwe unogona saka kusagadzikana kana paine hutete uye monotony pakona.
Iwe saka unomiririra wekutanga wekupedzisira Chiratidzo, nechiratidzo chekutanga chakabatana neicho 'moto' chinhu. Zvinokurudzira zvemukati rudo rwekuda uye kuongorora. Iwe uri wekutanga-mwero mukundi uye mushingi.
Ziva kuti unomiririra simba rekumera, kuitira kuti usarega uswa huchikura pairi kuti uongorore. Iwe uri kupfuura unofara kutevera maruva uye nyuchi uye unosarudza kukanda murusununguko zvakare nenzira yako wega.
Iwe une kudiwa kukuru kwekunakidzwa uye rusununguko. Panguva imwechete iwe une imwe, inofadza uye kune yakawanda isingadzivisike kuchena. Iwe uchanyatso cherekedza kuti iwe unayo inokurumidza kubatana, pamwe ne simba remagineti .
Ndiyo nyika Mars yakabatana nechiratidzo chenyu chenyeredzi. Izvi zvinokuita kuti uwedzere kusununguka muhunhu hwako, kuitira kuti iwe utore matanho pakarepo. Iwe uchave uchiziva nekupindura kubva pakutanga kwekuda. Kushamwaridzana kunoita basa rakakosha muhupenyu hwako hwerudo.
Iwe unoshingairira, unongoerekana waita uye iwe unoda kusundira yako miganho.
Ida horoscope Taurus
Uri kutarisira muhupenyu hwako hwerudo Taurus uye une sarudzo yekutora nyore. Chirevo chako chakasiyana neAries, kukurumidza kukurumidza hakuwanzo kunaka . Nekusimba kwako kwese, haugone kubviswa pano. Iwe unotora nguva yese mupasi uye, sekukodzera kweyechokwadi bon vivant, iwe unonakidzwawo nenzira yekudanana kwako.
Paunenge uchinge wakundwa uye iwe wazvigadzika pamwe newaunoda, hapana kudzokera shure. Iwe ndiwe chiratidzo chakatendeka pane ese gumi nemaviri rudo zodiac zviratidzo anodiwa Taurus.
Iwe zvakare sarudza kuchengeta zvaunofarira zvekuchengeta zvinhu zviri nyore uye zvakapusa nyore. Izvi zvakasununguka zvinoshandawo kumatambudziko ako erudo. Kuchengeteka uye kugadzikana ndizvo zvakakosha zvinangwa uye ndizvo zvinangwa zvako.
Hupenyu hwako hwerudo huchavakwa kubva pahwaro hwakasimba uye uchapika nekusingaperi. Iyo shiri ine rombo rakanaka inouya nenzira yako saka inogona kuvimba neyekunyepedzera rudo mudiwa iyo inogona kunyatso kuvakwa pamusoro.
Iwe unomiririra element Earth uye iwe zvakare uri wekutanga chiratidzo chezodhiac. Nezvo iwe unomiririra yakachena fomu uye izvi zvinoreva an hwakanakisa hwaro hwekukura uye kutumbuka kwehupenyu hwako hwerudo . Mativi ese aripo uye kana 'asingapesani' kwechinguva, unogona kushandisa muviri wako wakasimba kuwedzera simba rakawanda kuita kuti hupenyu hwako hwerudo hubudirire. Iwe haunyari kure neTaurus.
Nyika Venus yakabatana newe, izvo zvinowedzera kukurudzira moyo wako wakanaka kuti uve nemufaro wakazara kana iwe newaunoda muchikwanisa nakidzwa nezvese zvidiki uye zvakanaka zvinhu muhupenyu . Nekudaro, seyechokwadi bon vivant hautye kunakidzwa neyakajeka Wellness kupera kwevhiki neako mudiwa, ichiteverwa nedinari uye husiku husiku kugara mune yakasarudzika nzvimbo yekutandarira.
Wako pfungwa dzenyama vanomutswa pamativi ese kubva kune ako dzimwe nguva ari kutsimwaira muviri uye vanongofara chete kupihwa nezvishuwo zvavo.
Motto yako yerudo ndeye 'narinhi narinhi'.
Ida horoscope Gemini
Seye tariro yechokwadi unonakidzwa nehupenyu hwako hwerudo uchifara Gemini zvakanyanya. Huzivi hwako hwehupenyu ndihwo Hupenyu haufanire kuve hwakaomarara uye hwakaoma uye neizvi unonyatso wedzera kupenya kunoshamisa kune kwako rudo nyaya uye gumi nemaviri erudo mapoka enyeredzi ekumadokero zodiac.
Nekufamba kwako kukuru unoda zvakawanda rusununguko uye rusununguko rwekufamba muhukama hwako . Iwe unoda kugovana yako denderedzwa hombe yeshamwari uye vaunozivana nemumwe wako. Uye zvakare, iwe unozonakidzwa nazvo kana ukasunungurwa uine chivimbo chakazara kuti ugone kubuda wega.
Wadzoka here pamwe newaunoda, unokudza hunhu hwako 'Gemini' sekufananidzirwa kunodanwa zviuru zvemakore apfuura. Iwe wega uye zuva rako wega chinhu chisingawanzoitika kwauri. Unoda shamwari padhuze newe, waunogona kupedza naye zuva rese mukuchinjana, uye pamusoro pezvose kugona kuita zvese 'pamwechete'. Muchidimbu, hauna kuuya kuzogara wega.
Kana iwe usina kuroora panguva ino, saka shandisa yakawanda nguva uine wako moyo shamwari.
Iwe une yakatarisa maitiro uye iwe unowana akawanda misoro inonakidza. Izvi zvinokuita iwe kukurukurirana kukuru . Iwe unofarira kugovana yako yakafara ruzivo arc nerudo rwehupenyu hwako uye neizvi iwe zvechokwadi haukanganise iyo yemhepo element iyo iwe yawakazvarirwa.
Iyo inozorodza uye inovhura pachena ndiwo maitiro ako, anokushongedza uye ari kurova kuitira kuchengetedza rudo rwako hukama.
Iyo nhare mbozha yeMercury nokudaro yakanyatsobatana nehunhu hwako hwekubatanidza, kuti iwe unyatsoita nakidzwa nekuve munzira nemudiwa wako . Mumotokari, chitima kana ndege munzira yekuenda kunzvimbo yakanaka yekutandarira, masango kana mahombekombe anokuitira zvakanaka. Iwe unofarirawo kuva mumhepo pamwe chete , uyezve nekuzorora pane inodziya kirabhu kirabhu ine imba yekutandarira kwaunogona kushandisa maawa.
Kune kutaura pamusoro pezvese zvinhu, mauri kuda kugovana zviitiko zvako pamwe chete uye zvirokwazvo hazvisi zvakanyanya kunetsa kugadzirisa.
Ida horoscope Cancer
Iwe uri mupi wechokwadi, Cancer yakapfava, uye iyi zvakare ndiyo hwaro iyo yaunotarisana nehupenyu hwako hwerudo mune zvese. Kana iwe uchinzwa kudziya uye yako vanonzwa vakakuudza kuti hapana ngozi , iwe unozonyatso zorora.
Saka zvinoda imwe nguva usati wabvisa nhumbi dzokurwa nadzo, idzo dzaunochengeta pamwe chete sechikorobho. Kana iye wechokwadi 'Jacob' apinda muhupenyu hwako hwerudo, iwe unoregedza kunyara kwese kwaunoshongedza, uye iwe unonakidzwa zvakanyanya neakanakisa rudo hupenyu.
Unonakidzwa nazvo zvakanyanya kana uchikwanisa kuzvipuruzira uye iwe unogona kutora chero chinhu kana zvasvika imba uye kugadzikana . Kuvaka hupenyu hwemhuri pamwe chete newako mudiwa is a big moyo chishuwo . Unoita zvakanaka Cancer yeKenza, unodawo kukosheswa.
Iyi horoscope yerudo inokuudza kuti kupedza maawa pasofa, ne yerudo kenduru mwenje uye chitofu chehuni mufananidzo wekupedzisira kwauri. Iwe unokoshesa zvinhu zvidiki muhupenyu uye unogona kugutsikana kwazvo nekupedza maawa newaunoda mukati uye mukati meimba.
Kugadzira grocery pamwe chete wobva wagadzika nekapu inotonhorera uye inotonhorera yetii inoita kuti hupenyu hwako hwekunakidzwa hugutsikane.
Chako rudo zodiac chiratidzo chinopihwa kune inogara ichiyerera element Mvura. Iwe uchanyatso kuziva kuti iwe unogona kugara nguva dzose unopinza kwete kurasikirwa pachako mune imwe. Zvirokwazvo kana pakave nematambudziko muhupenyu hwako hwerudo.
Manzwiro uye manzwiro anogara achiuya pekutanga uye izvi zvinogona zvechokwadi zvakare kuva gomba kwauri, kuitira kuti uzvirasire. Shinga kutaura zvaunonzwa uye zvaunoda.
Mwedzi ndeweCancer uye neizvi anokuremekedza kuburikidza neese akasiyana maface aanoratidza mudenga rinopenyesa nyeredzi. Pamwe chete newaunoda, mufaro wekupedzisira ndipo apo ganda rako rinogara rakapuruzirwa nemafuta akapfava. Iwe unonakidzwa nekunakirwa kutanga kwakapfava uye kunodziya, uko kunopera mukunzwa kwakanyanya kwenyama.
Unoda kuvezwa wega.
Ida horoscope Leo
Sechiratidzo chinokudzwa cheiyo horoscopes erudo, yako sango mane rinongofara chete kuti ribatwe Shumba. Iwe uri hunhu une Hukuru uye unodziya moyo uye neizvi unofara kudzorera zvaunowana kubva kune waunoda.
Iko kusetsa kuzvitarisa iwe, hupenyu uye zvimwe zvinotapukira uye zvinodyisa hupenyu hwako hwerudo nenzira inofadza. Une zvakawanda zve kutanga uye kuda kutungamira kubva mukushingairira kwako kukuru fadza mumwe wako.
Iwe une nzwisiso yakafara uye unofarira kuenda pamwe chete kunopemberera hupenyu. Wakazvarwa pasi penzvimbo yepamusoro yezhizha iwe zvakare unoda kuwana zvese murudo nehupenyu nekushingaira kwako kose . Iwe unoziva nezvehukama hwehupenyu uye unosarudza kufunga kuti zuva rega rega rinofanirwa kuve mhemberero zvakare. Kana mudiwa wako akatsamwa, anogona kuvimba nerutsigiro rwako nerutsigiro.
Kunze kwekukwanisa kupedza nguva muri pamwe chete, nemiwo munonakidzwa kuva neshamwari dzako uye kushamwaridzana nevanhu . Iwe unoziva zvakare kuyananisa izvi zvakakwana nemhedzisiro yenguva dzerudo pamwe chete nemumwe wako, mauri iwe unogona kuve unodzivirira zvakanyanya.
Iwe saka unomiririra rwechipiri chiratidzo cherudo chezodhiac, mairi mune hunhu hwaunotoda zvirokwazvo tamba semwana muhukama hwako hwehukama .
Izvo zvakakosha kuti wako mudiwa anokwanisa kukupa iwe unorema dosi yenzvimbo kuti uve wakazvimiririra. Iwe unogadzira zvakanyanya, anokwezva Leo uye unoida kuti uone izvi.
Zuva izuva rako guru rekurudziro uye rinoita kuti unakirwe pamwe chete newaunoda uye nekuisa maruva panze. Une kuvimba kusingarambiki mukuyerera kwehupenyu hwako hwerudo . Nakidzwa neumbozha uye dhizaini pamwechete zvinoshamisa.
Wadiwa Shumba, iwe unomiririra mutungamiri anodakadza muhukama hwepedyo. Pano iwe zvakare uchaona zvichishamisa kusundira yako miganho.
Chaizvoizvo hapana chakanyanya kukuremera, icho chaunowana uine simba rehupenyu
Ida horoscope Virgo
Muhupenyu hwako hwerudo haumhanye zvakanaka- akaraira Virgo. Nemaitiro ako ane mwero uye ekuongorora, iwe ungatoda kutarisa kati kubva pamuti usati watanga kudanana.
Munhu waunogona ‘kuteya’ anofanira saka kubva kumhuri yakanaka. Pamberi peiyo yekutanga zuva, iwe watoita kare zvakati wandei zvekutanga zvekutsvaga uye kana zvichitaridzika kwauri, ipfungwa dzako dzakapenga dzinokuudza kuti dzakapfava.
Iwe unokura muhukama hwerudo uye iwe unotora nguva yese yeizvi. Paunenge uchinge wakazvibatanidza wega newakanaka uye ane rudo mudiwa, sevhisi yako inouya mune yayo yega.
With chaiyo yekuzvarwa, iwe unobatsira zvakanyanya uye mudiwa wako ane rombo rakanaka . Izvi, zvinosanganiswa nehunhu hwako hwepanyama uye kucheneswa kwepanyama kunoita kuti Cupido ive yakawanda kupfuura yakanaka.
Maitiro erudo aunoita anonyanya kushanda uye anoitika uye ari mune zvidiki, zvine rudo zvinangwa. Nezve kudanana, iwe ungade kutarisa iwo magazini kuti ugone kuchengeta ruzivo rwese kuti ruve rudo rwako hunyanzvi.
Iwe unogona zvakare kushanda zvishoma ne manzwiro . Kuratidzira zvaunonzwa uye zvishuwo zvako zvinogona kuve iko iko iko kwekushandisa zvekushandisa.
Izvo zvaunofanira kupa muhukama hwerudo hukama ndicho chinhu Nyika. Uyu ndiwo mubhedha wekuyemura kwakadzama, kuve pamwe chete mumafuta akapfava ekunyarara uye kushamwaridzana kusingagumi. Iwe zvakare unofarira kuenda kune zvakasikwa neako mudiwa kunotsvaga kunyarara kana iwe zvakare unogona kupedza rose Svondo wakanyudzwa mubhuku, kana imba iri padivi.
Ndiyo nyika yeMercury yawakabatana nayo uye inokupa mubatanidzwa wakakosha muhukama hwerudo, iwo mazwi asingadi kugara achitaurwa aripo pfungwa yekuremekedza .
Izvi zvinoshandawo kunehukama hwepedyo. Uri ane hanya zvakanyanya uye anopa chaiye , mauri kunakidzwa nekuzvichengeta uye unotarisira izvi kubva kune waunoda.
Amor anofara kurega iwe uchisundira yako miganho, nekudzika kunonakidza kwemweya.
Ida horoscope Libra
Kana dingindira rerudo rikakurukurwa uye nharaunda yako iri kutsvaga isina mvumo uye yemahara horoscope kuraira, iwe unofanirwa kutenderedzwa paRibra. Iwe unovavarira zvepamusoro uye zvakanakisa muhupenyu hwako hwerudo. Harmony, runako uye kuwana chiyero chakaringana ndeimwe yehupenyu hwako mamishini .
Hwaro hwamunoisa muhukama ndihwo Kana iwe uchifara, saka ini ndinofara . Iyi zvirokwazvo inoshamisa pokutangira chero bedzi iwe usinga rasa hunhu hwako uye dzimwe nguva une kusahadzika kwakakomba. Hunhu hwako ndewekuti unokwanisa kwazvo kufamba neimwe, kuti pane njodzi yekurasikirwa iwe kukona .
Uine yako munyoro uye ane rudo hunhu hunhu hwaunofarira protagonist muhupenyu hwako zvakanyanya. Uchafarira kumuka pamwe chete, kushanda nguva, uye nekudzoka kumba pamwe chete uye kunakidzwa kwenguva refu, yemhepo manheru.
Unoda kubuda pamwe chete , ita Guta Rwendo kuti utarise uye utenge zvigadzirwa zvemafashoni zvazvino, kana kunakidzwa nekuzorora pamwe chete pamubhedha unoyevedza uye wakapfava pamberi pebhubhu. Chauri kuda kunakidzwa nehupenyu pamwe chete newaunoda uye kuwana zvakazara kubva pane zvese zvinogoneka.
SaRibra, iwe unomiririra chiratidzo chinomwe-cheyeredzi yekuda zodiac, inova iyo yemhepo, uye unoishandisa nekutenda.
Iwe unofarira hurukuro dzakasiyana siyana, kuchinjana uye pamwe nerudo rwehupenyu hwako haugone kumira kutaura. Zviri chaizvo zvakakosha kuti iwe ugovane . Kushanda pamwe chete, kugara pamwe chete uye kupinda muwanano yetsika kunokodzera iwe.
Iyo yakanaka nyika Venus inongofara chete kuti ive nehukama newe uye neiyi chipikiri chakarohwa mumusoro chauri iwe kudanana kwechokwadi . Iwe unovhura moyo wako nyore nyore kune imwe. Kunakidzwa nerudo rwaCupid kunonamira pamwe zvinoreva kubatana kwekupedzisira. Uri nyoro uye inogamuchira mune eroticism apo kusahadzika kwako kwese kuri shure kwako.
SeNjiva yerunyararo, unomiririra zvese nezve hupenyu hwerudo.
Scorpio rudo horoscope
Zviri zvako kusanzwisisika uye kusanzwisisika kutarisa iyo yausingatenderi iwe kuti ubatwe nekukurumidza Scorpio. Kunyangwe mudiwa wako dzimwe nguva haazive zviri kuitika mune yako moyo unonzwisisa . Iwe unonzwa manzwiro uye manzwiro zvakanyanya kwazvo uye ndosaka kuchengetedzeka uye kuvimbika kuchiuya pekutanga.
Iwe unozoona hupenyu hwako hwerudo mu zvakanyanya uye zvinodikanwa nzira. Kupinda mukati meiyo rudo musimboti kwakakosha kwauri uye kana rudo rwangogadziriswa, iwe unoenda kune 'zvese kana pasina' rudo rudo hukama.
Nguva yekutanga nemudiwa wako uye kunzwa kwakatsigirwa zvakaringana zvakakosha kwazvo kwauri. Mumwe munhu padivi pako waunogona kupfuura nepakati pekukora uye kuonda. Unoda kugara uchibuda kunze kwenyika uye sarudza kugadzirisa pasi nemumwe wako pachiwi chisingagarwi .
Ikoko zviri pachena uye pfungwa dzako dzemanzwiro dzinouya kuzorora zvakare. Bhuku rakanaka, mu- hurukuro dzakadzama newaunoda , kana kunyura mune zvepfungwa uye zvakavanzika zvehupenyu pamwe chete unokuitira zvakanaka. Kufamba newaunoda kuti uwane nzvimbo dzisingazivikanwe, kuyamura masango uye kushanyira maPiramidhi kunogutsa nzara yako ine shungu.
Semumiriri wechinhu chemvura une tsika yeku kuvanza manzwiro uye zvishuwo uye kuzviviga zvakadzika kure . Zviri zvako ruzivo rwemunhu rwakakwana izvo pasina mubvunzo zvakave nechokwadi chekuti shiri ine mhanza iri padhuze newe inokuziva iwe senge seri kweruoko rwako. Koshesa uyu wekupedzisira kunzwa munhu.
Iyo ipuraneti diki Pluto ine masimba makuru ekushandura ari ako uye ichi chiratidzo cherudo rwako horoscope. Hapana chinhu chinoshanduka kupfuura hupenyu, mwana wevanhu uyezvezve nehukama hwako hwerudo.
Yakarungwa muhupenyu, iwe unoziva nezve izvi zvisina mumwe. Pamwe chete newawakaroorana naye munokura mukubudirira uye mumatambudziko mukava vaviri vari padyo uye iwe unoziva izvo zviripo zvekuita.
Kushuva kushuva kunoita kuti iwe ubatanidzane newaunoda uye kunosimbisa chako chekupedzisira rudo kubatana.
Ida horoscope Sagittarius
Iwe une zvese zvaunoda kuti uwane zvibodzwa zvakakwana neako unotyisa uye une tariro moyo muhupenyu hwako hwerudo Sagittarius.
Uzere nechivimbo uye nechido, unozvinyudza mune zverudo nyaya uye unoramba uine tariro kunyangwe uine rudo headwind. Uri anokurumidza uye nekukurumidza kudziya kune akanaka matanho uye unosarudza kufamba famba uchitenderera pasirese neshamwari yako .
Wako hunhu uye hunoseka hunhu ndiko kunaka kwako . Paunenge uchipinda mudariro maziso ari pauri uye izvi zvinoita kuti zvive nyore kwauri kuti ukurumidze kusangana nehunhu hunonakidza iyo Cupid inotungamira kwauri.
Iwe unonzwa sekunge inodzvanya, unogona kubata pasi rese. Zvisinei, chimwe chinhu chakakosha chakabatanidzwa pane izvi. Wako mudiwa anofanira kugona kupa iwe rusununguko ‘Sejecha rakasununguka mundiro yeruoko rwako’ . Izvi zvinoda ropa rako reArabia. Kana chivimbo ichi chisipo, siya kuora mwoyo kwako.
Iko kunakidzwa kwakanyanya kana iwe uchigona kufamba nerudo rwehupenyu hwako uye kuongorora rakakura rakakura nyika. Kutsvaga tsika uye kufamba kuburikidza nemasikirwo pamwe pabhiza ndirwo rudo rwake rwekupedzisira.
Iwe unomiririra element element moto mudiwa Sagittarius uye iwe unozoona kuti kugara wakanyarara chirango kwauri, kungofanana nemitoro yakakura kwazvo. Kana paine njodzi yekuti yakatarwa mapateni ari kuvandira murudo rwenyu, ipapo kuridza bhero.
Zviri zvako wakasununguka mweya uye hasha hunhu izvo zvinokukoka iwe kuti ugare zvakanyanya muhukama hwako. Kunakidzwa uye kungoerekana kwaita nzendo zvinokuitira zvakanaka, mauri kuda kugara pasi nguva dzose uye unozoguma mune zvakadzama, hurukuro dzefilosofi.
Nyika huru uye anobatsira Jupiter yakabatana newe. Izvi zvinowedzera chishuwo chako che kuvhura rudo hukama , maungada kuva nahwo kunakidzwa newawakaroorana naye muhupenyu .
Hupenyu hwako hwekuverenga nyeredzi hunofara kukupa iwe vimbiso yenguva yemhepo uye yekuwedzera nguva. Izvi zvinokodzera yako moyo une shungu zvakakwana uye zvinowedzera chishuwo chako mukati menguva dzakanyanya dzerudo, umo iwe unogovana nguva dzeasvini newaunoda.
Iko kwekupedzisira kusanganisa kunoita kuti ropa rako riyerere zvakare uye kunopa rako rine rudo uye rerupo moyo mufaro wechokwadi wehupenyu.
Ida horoscope Capricorn
Hakuna gomo rakakwirisa iwe kana rudo rwehupenyu hwako ruchayambuka nzira yako Capricorn. Iyo horoscope yerudo inokuudza kuti iwe uri mumwe munhu waunogona kuvaka pamusoro . Iwe uri zvakanyanya yakakomba uye yakavimbika murudo uye unopa zvese zviri musimba rako kuti upe zvimwe zvinodiwa.
Uri kutarisa rudo pamusoro pese rinoshanda divi uye opts yenzira yekuchenjerera uye yakati wandei yekuchengetedza , sezvo pfarivari yeAmori yasvetwa. Kana iwe wabudirira kusvika padanho rerudo, iwe uri rudo mudiwa weupenyu hwese .
Sechiratidzo chekuda nyeredzi cherudo chezodhiac, iwe unoda kuita basa rako uye nekuvaka kweMambo hwako. Saka iwe unoda mumwe munhu padivi pako anonyatsokutsigira uye anokukurudzira mune izvi. Naizvozvi, iwe zvakare unonakidzwa nazvo zvakanyanya kana mudiwa wako achipa chimiro kune ake hunhu uye matarenda uye achiwana chimwe chinhu muhupenyu.
Kuzorora pamwe chete uye kuitora kunoshamisa . Nebhuku rakanaka mukona yekutandarira yehotera, kushanyira konzati pamwe chete kana kuongorora mumuseum, inguva dzaunofarira. Joint art, yetsika uye yesainzi nzendo ndiko kuzorora kwekupedzisira kwauri.
Ndiyo nyika Saturn iyo inokurudzira iwe mune chako chishuwo chekusimbisa hupenyu hwako hwerudo nezvinangwa zvekongiri. Iwe shingairira kukwana mune zvese zvaunotora uye izvi zvakasununguka zvinoshandawo kune yako hupenyu hwerudo .
Kana iwe wakakunda chero kusava nechokwadi, iwe unozvipa iwe zvakakwana kutarisira Capricorn. Iwe unoita zvakanaka kuzviratidza kana paine chinoshaikwa muhupenyu hwako hwerudo. Kana iwe ukasaita izvi, unogona kupedzisira wakamira wega wega izvo zvakaoma kubvisa.
Muchokwadi iwe unononoka kubuda uye izvi zvinoshandawo kunehukama hwepedyo. Hauzvipe iwe nekukurumidza zvakadaro, zvakadaro, kana budiriro yacho yaitika, mudiwa wako ane shamwari yakavimbika yehupenyu. Uri ane hanya zvakanyanya mumutambo werudo uye unakirwe nekuva pamwe chete mukunyarara.
Mumwe wako saka murume wechokwadi ane rombo.
Ida horoscope Aquarius
Uri yechokwadi avant-garde yerudzi rweWaterman uye izvi zvinoshandawo kune hwako hupenyu hwerudo.
Chaunoda murudo kuve inokwanisa kunzwa isina mapapiro nenzira kugara uchiita kubhururuka kwako. Shamwari padivi pako uyo anonzwisisa yako yemazuva ano uye isinganzwisisike mweya yenguva yakakosha kune yako rudo nyaya . Izvo zvauri kutsvaga ishamwari.
Izvo zvaunokwezva kune mumwe wako mumwe munhu anomira padivi pako uye kumashure kwako. Hunhu hwakanaka uye hune rudo hunonyanya kuenzana nezvauri. Rusununguko, kuenzana uye hukama ndidzo pfungwa dzinopfura pakati perudo dzakasimuka uye dzinoita kuti rudo rwako rukure.
Kana iwe wakakwenenzverwa, pane mukana wakanaka wekuti unzwe kushomeka uye kuzvimisikidza pachako zvinoguma . Sechokwadi Aquarius, inokodzera iwe, semuenzaniso, kuva nehukama hwehukama, kana kugadzira yako yega nzvimbo mumba mako maunogona kuenda pamudyandigere nguva dzese.
Iwe unofunga kuti zvinonakidza kuenda kunze nemudiwa wako . Idzi nzendo dzinowanzove neyepakutanga tint. Iwe unofarira kurarama chirevo chako 'nei sarudza nzira yakajairika kana zvinhu zvichigona kuitwa zvakasiyana'. Iwe uri mumwe munhu anoda kuvhunika pasi murudo. Yakanaka chikepe chechikepe kuti ugare uchisarudza hombe masudhi chimwe chinhu chinokukodzera.
Iwe wakaberekerwa pasi pechinhu chemhepo uye izvi zvinoreva kuti iwe uri kunyanya mumwe munhu ane pfungwa . Saka iwe unobata nemanzwiro uye nemanzwiro nenzira yepfungwa. Kana hupenyu hwako hwerudo hwakanetsa zvishoma, zvakanaka kuti utarise newaunoda kuti zvakamira sei. Kana mumwe wako akakurova uchipesana nebvudzi, kutonhorera uye kuomarara ndizvo zvinoguma zvaitika.
Iyo quirky nyika Uranus inova nechokwadi chekuti chako chishuwo che kuzvimiririra hukuru.
Kuita marongero uye kuvaka ramangwana pamwechete ndizvo zvaunofanira iwe. Ndiwo maonero ako epanguva ino uye nehungwaru ehupenyu anoita kuti ufambire mberi uye kuyedza muhupenyu hwako hwerudo . Izvi zvinoshandawo kune eroticism.
Pamwe chete neshamwari yako yerudo pakutsvagisa, zvaunotarisira zverudo zvinokuita iwe kuti uvhote kumusoro.
Ida horoscope Pisces
Sekuvhara kwerudo nyeredzi iwe une hombe uye rudo moyo iyo inokodzera nyika yese mune inotapira, yakapfava Pisces.
Iwe kurota kwemuchinda (ss) pabhiza jena uye iwe unogona kutora hupenyu hwese pano. Izvo iwe zvauri kutsvaga ndewemudiwa waunaye naye inogona kugovana zvakavanzika uye zvekufungidzira zviitiko , maunogona kusanganisa zvizere.
Izvo iwe zvaunoda murudo ibhawa inodziya yakazadzwa neLavender herbs uye mudiwa kwaunogona kuve iwe pachako.
Uri ane tsitsi uye anogona kuita hypersensitive kana ichishaikwa. Kwese kwaunenge uri uye chero chaunoita, iwe unokasira kugutsikana uye unakirwe nguva dzese pamwe chete. Izvo zvinonakidza kuti iwe unakirwe nehunyanzvi hwese hwauinacho uye zviri nani kugoverana izvi zvisingaite nemumwe wako.
Kuteerera pamwe chete kune zvinyoro nyoro zvemumhanzi, kudzidzira kufungisisa kana Yoga uye kunwa mishonga tii unoita yako Ultra-inonzwisisika senses kupfuura zvakanaka. Ndihwo hunhu hwako kunyatso nyudzwa mune mumwe wako uye wozvirasa. Wako hunhu hunopera uye zvechokwadi ichi ndicho chigamba.
Ita shuwa kuti hausi kurasikirwa neako kuzivikanwa . Nekuti usati waziva iwe unova mumwe wacho.
Chinhu chinogara chichiyerera chemvura ndechako. Hove uye neizvi unoita zvekutarisana nemumwe uye dzimwe nguva izvi zvinoitawo kuti usabatika. Izvi zvinoreva zvakare kuti iwe nemunhu waunoda munogona kunakidzwa neyekupedzisira nekufamba kunzvimbo dzisingazivikanwe. Iwe uri nyanzvi yezvemweya uye mune izvi iwe unodawo nzvimbo kubva kune waunoda kusvika ongorora zvese.
Kuburikidza nemasimba asinganzwisisike epuraneti yakanaka-yebhuruu Neptune hupenyu hwako hwerudo hwakavezwa neyako yekupedzisira intuition uye rudo zvido. Iwe inzwa chaizvo zvinodiwa nemudiwa wako uye uhwu hunhu hwako.
Iwe unonzwa wakachengeteka uye unokosheswa, mabhureki ese anoburitswa uye iwe newaunoda munonakidzwa zvakanyanya.
Kuchenjera Kutamba: Aya NdiMabatiro Aunoita Iwe Kutamba 10x Zvirinani…
Kuzvidzora-hypnosis Kuti Uzadzise Chinangwa Chako: Unoita Sei Izvo?
Wakanga Uri Aiko Muhupenyu Hwekare? Yako Karma Mune Yako…
Birthstone: Nderipi Ibwe Rinokosha Ndiro Mwedzi Wako Wokuberekwa?
Ndeapi maZodiac Signs Anowirirana? Tsvaga zvinoenderana nerudo